Momba anay - Wuxi Yaqin Commercial And Trading Co., Ltd.
Niorina tamin'ny taona 2008, Wuxi Yaqin Grinding Tools co., Ltd.dia orinasa ara-barotra matihanina izay avy amin'ny orinasa iray manokana amin'ny famokarana fitaovana fasika sy fitaovana fikosoham-bary.
Ny orinasa lehibe indrindra: famokarana matihanina ny fantsika fantsika bits, sanding satroka, sanding tarika, fantsika milina sy ny fitaovana fantsika hafa.Ny vokatray dia malaza amidy any Etazonia, Russia, France, UK, Ukraine, Germany, Italy, sns.
orinasa indostrialy sy varotra mitambatra, miantoka ny vidiny
Teknisiana matihanina sy mpivarotra
Miaraka amin'ny ekipa matihanina aorian'ny varotra
Nanolo-tena ho lasa mpiara-miasa tianao indrindra
13 taona traikefa matihanina amin'ny fitaovana fitotoana
Fandefasana haingana sy maharitra
Wuxi Yaqin Grinding Tools Co., Ltd. dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana fitaovana fametahana sy fitaovana fikosoham-bary mandritra ny 13 taona.Ny orinasanay dia miorina ao xinghua, ny velaran'ny zavamaniry dia 2000 metatra toradroa, manana ny teknisiana sy ny famokarana fitaovana mandroso indrindra izahay.
Noho izany, dia nanangona indostria traikefa, Yaqin dia nanangona be dia be ny an-trano tsy mivadika mpividy amin'ny avo-end kalitao sy ny vidiny ambany.
Izy no mpamatsy ny ankamaroan'ny orinasa varotra any ivelany any Shina.Kendrenay ny hanome vokatra sy serivisy avo lenta ho an'ny mpanjifanay.
Tao anatin'ny roa taona farany, ny fanatrehana ny fampirantiana ihany koa dia nahafahan'i Yaqin nioty ny fitiavan'ny Mpividy vahiny, ny fideran'ny mpividy sy ny fanavotana ihany koa dia nahatonga an'i Yaqin ho tapa-kevitra ny handeha any ivelany.
Manana fitantanana avo lenta, mpamorona teknika matihanina ary ekipan'ny mpiasa amin'ny famokarana.Manome OEM sy ODM izahay, manome serivisy fanamboarana, famokarana ary fanondranana.
Ny vokatra dia aondrana indrindra any Etazonia, Rosia, Ukraine, Grande-Bretagne, Brezila, Israely, Meksika, Polonina, Italia, Alemaina, Vietnam, sns.
Tahaka ny fango an'i Yaqin, ny tanjon'i Yaqin dia ny hamihina ny tany ary hamela ny vokatra azony hiparitaka eran'izao tontolo izao!
Ny soatoavina fototra an'i Yaqin dia ny "FAHASOAVANA SY FAHAOVAHOVANA", izay fototry ny fitsipika ankapobeny momba ny fandraharahana an'i Yaqin nandritra ny 13 taona ary mijanona ho manan-danja toy ny taloha.
SASANY amin'ireo mpanjifanay
Nahazo ny fitokisana sy ny fiderana avy amin'ny mpanjifa izahay, ary nanangana fifandraisana tsara amin'ny fiaraha-miasa.
Nanomboka tamin'ny 2008, ny orinasa dia nandray anjara tamin'ny mihoatra ny 50 ao an-toerana na vahiny fampirantiana iombonana, toy ny InterCharm Ukraine, Cosmoprof Amerika Avaratra, Cosmoprof bologna, Beauty Duesseldorf, Intercham Russia, Guangzhou Beauty Expo, sns.